Faa'iidooyinka Shaxan Dog Qurxinta - Shiinaha Ningbo Haoshu Yinjiang Jintangli
Haydarooliga PET-HAGAAJINTA Sheeko TYE Z
Haydarooliga PET GROOMINGTABLE
foot White birta
Faa'iidooyinka Shaxan Qurxinta Dog
miiska ayaa si toos ah dhigeysa eey at height a haboon qurxinta. Ma aha in aad si aad u barato badan ama isku dayaan in ay awkwardly meydhaa eygaaga halka uu isagu ama iyadu waa in aad dhabta. Halkii, miiska hagaajinta ka dhigeysa eyga at height ugu fiican ee qurxinta.
Bulshada oo dhan loox eey qurxinta iman nooc ka mid ah dusha aan warqada - ha iibsato mid ka mid ah haddii uu jiro kursiga godgodan ama nooca qaar ka mid ah cover arrintaasna waa u fududahay eygaaga si xajin. Your eey noqon doonaa qoyan iyo simbiriirixan karo iyo simbiriirixan haddii dusha sare ma aha ammaan. Intaa waxaa dheer, miisaska qurxinta badan oo iman gacan bir ah oo lagu jebiyo oo loo isticmaali karo in aad sii wadatid eey si ammaan ah meel inta lagu jiro hagaajinta ah.
Talaabada on, talaabo off
Iyadoo eey qurxinta loox midkood Haydarooliga ama korontada, aad hoos u dhigi karaan miiska ku dhowaad dhammaan jidka loo maro dabaqa. Tani waa feature weyn eey taasi culus ama wax yar ka dareen argagax ama carabka ku adkeeyay. Halkii la adeegsanayo xoog si ay u fuliyaan eyga meesha duyaarin ah, aad si fudud u isticmaali xadhig ah ku socotaan eey miiska u gal. Marka duyaarin ay ka badan tahay, hoos miiska oo ay eyga socon off.
waqti Post: Aug-09-2018
Cinwaanka: Ningbo HAISHU DEGMADA YINJIANG MAGAALADA GUDAHA Ningbo YINZHOU HUACHEN waalka warshad